यसकारण सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दो | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २१ श्रावण २०७६, मंगलवार १३:४५ लेखक Sabita Roka
रुपन्देही । रुपन्देहीमा विभिन्न कारणले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार, मदिरा सेवन, लागुऔषध, असफल प्रेम विवाहका कारण सम्बन्ध विच्छेद बढ्दै गएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ६३१ सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा परेकामध्ये ५०२ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ भने १२९ अझै बाँकी रहेको छ ।
अन्यायमा परेकालाई समेट्न नेकपाको केस ४४१ सदस्यबाट बढ्ने
काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो । पार्टी एकता भएको चारमहिनासम्म पनि पोलिटब्यूरो बनेको…
रातिदेखि नै पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध
काठमाडाैं । माथिबाट आएको लेदो सडकमा जमेपछि पृथ्वी राजमार्ग आज रातिदेखि अवरुद्ध भएको छ । धादिङको गल्छी गाउँपालिका–६ बैरेनीबजारबाट…
होस् गर्नुहोस गलत सूचना दिँदा जेल जानुपर्ला, गृहले ल्यायो नयाँ ऐन
काठमाडौं । विपदको बारेमा कहिलेकाँही भ्रम छर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गर्दछ । यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ…
कुखुरा नपाल्ने गाउँ !
मकवानपुर । हिमाल, पहाड होस् वा तराई, अधिकांशले कुखुरा पाल्ने गर्छन् । थोरैले व्यावसायिक र धेरैले परम्परागत ढंगले कुखुरा…
कात्तिक र साराको जोडीे पक्का
बलिउड । शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको ‘लुका छुपी’ सिनेमाका मुख्य अभिनेता कात्तिक आर्यनले आफ्ना प्रिय निर्देशक इम्तियाज अलिको एक सफल…
पद खुस्किन लागेका मन्त्रीको १२ अर्बको प्रोजेक्टमा नजर, परियोजना सुरु नहुँदै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सर्लाहीका आफन्त भर्ति गर्न दबाब दिन थाले !
काठमाडौं । सबैभन्दा पछि स्थापना भएको पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री शम्भुलाल…